Newsboat a ukwuu RSS na-arụ ọrụ si ọnụ | Site na Linux
Newsboat a ukwuu RSS na-arụ ọrụ si ọnụ
Newsboat bụ ndụdụ nke newsbeuter nke bu a console RSS na-agụ maka sistemụ arụmọrụ yiri UNIX, gụnyere Linux, FreeBSD, OpenBSD, na macOS. N'adịghị ka newsbeuter, ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ nke ọma, mgbe mmepe nke newbeuter na-akwụsị.
Tụnyere ndị ọzọ ngwa ngwa na nnukwu ebe nchekwa na-ewe RSS ndepụta RSS, Newsboat bụ nhọrọ kachasị mma maka onye ọ bụla na-achọ onye na-agụ RSS dị mfe, nkwafu na ngwa ngwa nke enwere ike ijikwa ya site na keyboard.
Edere oru ngo a na C ++ iji ọba akwụkwọ dị iche iche n’asụsụ Rust kesara n’okpuru ikike MIT.
N'etiti atụmatụ ndị dị na Newsboat, anyị nwere ike ịchọta:
Na-akwado RSS 0.9x, 1.0, 2.0 na Atọm
Ohere nke ibudata pọdkastị
Nchịkọta kiibodu nwere ike ịkọwapụta njiko njikọ gị
Chọta ndepụta niile ebugo
Ikike iji kọwaa ndenye aha gị site na iji usoro mkpado na-agbanwe agbanwe
Ike ịgbakwunye usoro data aka ike na-eji sistemu na-agbanwe agbanwe nke nzacha na plugins
Ikike iji mepụta metachannels site na iji asụsụ ajuju siri ike
Ike ịmekọrịta ụgbọ mmiri na akaụntụ na bloglines.com
Bubata na mbupu nke ndebanye OPML
Ikike hazie ma kpochapụ agba nke njirimara niile;
Ike ịmekọrịta faili ntanetịime na Google Reader.
1 Banyere ụdị ọhụrụ nke Newsboat 2.17
2 Etu esi wụnye agụ akụkọ RSS Newsboat na Linux?
3 Njiji ojiji nke Newsboat
Banyere ụdị ọhụrụ nke Newsboat 2.17
Ugbu a Newsboat dị n'ụdị ya 2.17, nke eweputara na nso nso a ma gbakwunye ihe ọhụrụ.
Nke isi akwukwo ohuru nke kwụpụrụ na ụdị a ị ga-ahụ ọrụ emere iji melite nkwado maka Linux na nyiwe FreeBSD, dị ka ndozi e mere dị iche iche chinchi na-eweta na okuku ma ọ bụ na ebe nchekwa leaks.
E wezụga nke ahụ agbakwunyere ederede maka nhọrọ "nnukwu ntinye" na karịa ọrụ niile dị mkpa nke bụ ọrụ “nchekwa - ihe niile” iji chekwaa isiokwu niile dị na ndepụta.
Mgbakwunye ọzọ na ụdị ọhụrụ a bụ nke ntọala "dirbrowser-title-format" nke eji na igbe a na-akpọ n'oge "nchekwa-niile".
Enwekwara ike ikenye igodo ọkụ na-egosipụtakwa n'ihe gbasara mkparịta ụka sitere na "ịzọpụta-ihe niile".
Etinyere "nhọrọ-format-format" nhọrọ iji chọpụta ọdịdị nke okwu "Họrọ mkpado".
Etu esi wụnye agụ akụkọ RSS Newsboat na Linux?
Maka ndị nwere mmasị iji ma ọ bụ nwaa onye na-agụ RSS RSS a na sistemụ ha, Ha nwere ike ime ya site na isoro ntuziaka anyị na-eke n'okpuru.
Ọ dị mkpa ikwu nke ahụ e tinyebeghị ụdị ọhụrụ nke Newsboat a site na nchekwa nke nkesa Linux kachasị, ya mere maka ndị chọrọ ịwụnye site na ọwa gọọmentị nke sistemụ ha, ha ga-echere ụbọchị ole na ole.
Ihe enwere ike ime ugbu a bụ ibudata koodu isi nke ngwa na ịrụ mkpokọta na usoro.
Iji mee nke a, ha ga-emeghe ọnụ na ya ka ha ga-emezu iwu na-esonụ:
Na mkpokọta ejiri mee:
Ugbu a, maka ndị chọrọ ichere, mgbe ụdị ọhụrụ dị, nwere ike ime echichi site na-agba ọsọ nke ọ bụla n'ime iwu ndị a, dabere na distro gị.
Maka ndị ji ya Arch Linux na nkwekọrịta:
Mgbe maka Debian, Ubuntu, Linux Mint ma ọ bụ nkwekọrịta nke ndị a
N'ihe banyere Fedora:
Finalmente, maka nkesa Linux ndị ọzọ niile na-akwado nchịkọta Snap, nwere ike ịrụ nwụnye na iwu na-esonụ:
sudo snap wụnye ụgbọ mmiri
Njiji ojiji nke Newsboat
Iji Newsboat dị mfe, eziokwu zuru ezu iji kwado onwe gị n'ụzọ ị na-arụ ọrụ.
Na ọnụ, anyị ga-pịnye iwu:
Mara nhọrọ ọ na-enye anyị.
Ọzọkwa ịgbakwunye faili ntanetịime, ndia ka echekwara n'ime faịlụ. Nke ha gha agha n'ime uzo a:
Ha nwere ike imechi Ctrl + O wee pụọ na Ctrl + X
Enwere ike dezie faịlụ a na nchịkọta ederede ị họọrọ. N'ime faịlụ ahụ, ha ga-edowe na ahịrị ọ bụla ndepụta ha chọrọ ka egosiputa na Newsboat dị ka ndị a:
N'ikpeazụ, ịgụ faili ntanetịime, mee iwu na-esote na ọnụ:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Newsboat a ukwuu RSS na-arụ ọrụ si ọnụ
> Ike ịmekọrịta faili ntanetịime na Google Reader.
Nke ahụ ga-amasị m banyere 7-8 afọ gara aga
Echetara m iji akwụkwọ akụkọ na irssi na mutt n'oge gara aga, yana ọ bụ onye ọkwọ ụgbọala kachasị njọ, enwere m olileanya na ọ na-enyere aka inye ya nkwalite. Ọ dị nwute na ọ bụ usoro iwu na-ada.
Wepụtara nsụgharị ọhụrụ nke RPM 4.15, nke etinyeworị na Fedora 31 beta
Microsoft chọrọ ịtọhapụ Edge Chromium na Linux ma chọọ enyemaka gị